Fandrafetana ara-bola - Mpanamboatra vola an-tapitrisany
Olon-tsotra sy orinasa kely
Manolotra vahaolana sy torohevitra natokana ho an'ny olon-tsotra / fianakaviana / Business kely izahay ..
Ny fifindra-monina no tena tanjontsika. Midika izany fa ny mpanjifanay dia miara-miasa amin'ireo matihanina ara-dalàna za-draharaha. Dingana nataon-dàlana Hatramin'ny manaraka.
Mpanolo-tsaina momba ny trano
Ny lisitra misokatra sy ny serivisy manokana. Fividianana na fivarotana na manofa trano / trano / birao / fivarotana / asa tanana / tany fambolena / hotely / hotely.
Ny fananganana orinasa, Birao Virtual, Kaonty Fivoahana, fisoratana anarana ara-barotra, vahaolana HR amin'ny toerana rehetra.
Ny famatsiam-bola ny fitaovanao dia ahafahanao mitahiry ny volao ilaina amin'ny orin'asa hafa. Ampiasao ny tambajotra matanjaka sy ny traikefa ananantsika.
Natao mora avokoa ny kaonty: kaonty azo raisina, famatsiam-bola azo raisina ho fanamboarana, famatsiambola ny famatsiana ara-barotra.
Ny fanokafana kaonty banky dia mora natao na aiza na aiza ao amin'ny The World. Ny orinasa aminay dia manohitra tanteraka ny famotsiam-bola, varotra varotra ary ny fanodikodinam-bahoaka, noho izany, tsy mahazaka mpanjifa toy izany izahay.
Ny famatsiam-bola sy ny fangatahana kaonty
Serivisy nampiana lanja, mamela anao hifantoka amin'ireo fahaiza-manao fototra. Tsara ho an'ny orinasa sy fikambanana vaovao manomboka amin'ny Fitsipika vaovao.
Kitapo fandoavam-bola sy asa
Na dia ny matihanina indrindra sy matihanina mahita dia ny karama dia mety ho aretin'andoha. Sehatra manokana izy io, ka aleo ireo matihanina no hiatrehana izany.
Manampy ireo orinasa izahay hampiasa ny vinavinan'ny tombotsoany hahasoa azy ireo ary hitodika amin'ny asany manontolo.
Vinavinaina eo amin'ny sehatry ny asa
Ny tombantombana amin'ny sehatry ny fandraharahana dia lafiny iray miha-mitombo amin'ny drafi-bola lehibe, ny hetra, ny tatitra, ny fampifangaroana ary ny fahazoana sns, sns.
Torohevitra sy fanarahan-dalàna
Ny fihetsika miampita sisintany dia mihamitombo eo amin'ny sehatry ny fandraharahana manerantany. Manamora ny mpanjifanay ny manam-pahaizana manokana.
Serivisy iray ho an'ny olan'ny lalàna rehetra, INTERNATIONALLY. Manana fifamatorana ara-bola amin'ny saran'ny fifampiraharahana tsara izahay amin'ny mpisolovava, Firenena ara-dalàna ary fikambanana.
Manokana manokana izahay ary manome karazan'entana maro isan-karazany ho an'ny sehatra iraisam-pirenena
Rohy mahasoa amin'ny fahazoan-dàlana amin'ny serivisy ara-bola